Kofehy miaraka amin'ny rindrina manokana sy fitsaboana amin'ny hetsika ivelan'ny trano
Kofehy miaraka amin'ny fitsaboana manokana ho an'ny tetikasa any ivelany
Azo ovaina ny tontolo iainana any ivelany, ary ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny hetsika ivelan'ny trano. Arak'izany, ny vokatra ivelany sasany dia ilaina isan'andro.
Ny kofehy MH misy fitsaboana manokana dia mety amin'ny vokatra ivelany, toy ny valizy, akanjo fanatanjahan-tena, satroka, kiraro fanatanjahan-tena, lainy fitobiana sns. Ireo fitsaboana manokana ireo dia voahodina aorian'ny fatorana, noho izany ny fitsaboana dia mety amin'ny fibre staple, filament, spun core ary kofehy hafa.
Kofehy manjaitra polyester anti-UV:
Ny taratra ultraviolet manimba dia mampihena ny kofehy amin'ny fihenan'ny redox. Ny kofehy manohitra UV dia afaka mampihena ny fitrandrahana taratra ultraviolet, mampihemotra ny fahasimbana sy ny fahanteran'ny kofehy.
Mety amin'ny akanjo fiarovan'ny masoandro, satroka, akanjo milomano, akanjo fohy amoron-dranomasina sns.
Kofehy manjaitra manohitra Phenolic:
Ny fandokoana fénolika, izay antsoina koa hoe mavo mavo, dia ny fandokoana ireo kofehy sy lamba. Noho ny antony simika sy ny tontolo iainana ary ny fahanteran'ny kofehy, dia matetika ny "mavo" amin'ny vokatra fotsy. Ny habetsaky ny volomparasy fenolika dia mikasika ny hamandoan'ny tontolo iainana, ny maripana, ny azota azota. Ny kofehy MH dia nosedraina hatramin'ny kilasy 4-5 avy amin'ny antoko fahatelo ary nankatoavin'ny H&M tanteraka.
Mety amin'ny vokatra ivelany miloko maivana sy marevaka.
Kofehy miaraka amin'ny haingam-pandokoana tsara:
Amin'ny fampiasana dyestuff haingam-pandeha avo lenta, ny vokatra MH dia mety hahatratra ny vokatra tsy mihena amin'ny maripana 95 ° C. Ny kofehy MH dia mahatratra ny fenitra ISO-105-C06.
Mety amin'ny lamba simika avo lenta na vokatra mila fanamafisana ny hafanana avo.
Kofehy fanjairana polyester tsy tantera-drano:
Mety amin'ny fanjairana tarpaulin an'ny trano fanatobiana entana, fiara, sambo, ozinina, toeram-pitrandrahana, tokotanam-pitaterana, fiarandalamby, orinasa, fonosana amin'ny fambolena sy fiompiana, sns.
Kofehy PVA mety levona amin'ny rano
Kofehy polyester taratra ho an'ny zaitra
40S / 2 5000Y UV kofehy fanjairana fanoherana
Kofehy manjaitra polyester anti-Phenolic
Kofehy manjaitra kofehy Aramid
300D Kofehy polypropylene PP mainty